जाँदाजाँदै अख्तियार प्रमुखको व्यापक आलोचना, यस्तो छ कारण - Media Dabali
जाँदाजाँदै अख्तियार प्रमुखको व्यापक आलोचना, यस्तो छ कारण
काठमाडौं– गत आर्थिक वर्षमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले इतिहासमै सर्वाधिक मुद्दा दायर गरेर रेकर्ड बनाए । त्यस आधारमा आयोगका प्रमुख आयुक्त घिमिरेको अवकाश हुने बेला प्रशंसा हुनुपर्ने हो, तर त्यस्तो हुन सकेन ।
आइतबार घिमिरेले अवकाश पाउँदा पत्रिकाका पाना र सामाजिक सञ्जाल उनको आलोचनाले भरिएका थिए । हजार खानेलाई नछाड्ने र अर्ब खानेलाई नछुने रणनीति लिएको आरोप उनीमाथि लाग्यो ।
आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा पाँच सय मुद्दा दायर गर्ने घिमिरेको योजना थियो । लकडाउनका कारण उनी त्यसमा सफल भएनन् । तर, ४ सय ४१ मुद्दा दायर गरेर उनले नयाँ रेकर्ड भने बनाए । यसअघि एक वर्षमा यति धेरै मुद्दा कहिल्यै दर्ता भएको थिएन । तर, सबैजसो धेरैजसो मुद्दा तल्लो तहका कर्मचारीविरुद्ध छ । केही ठूला मुद्दा पनि आयोगले दायर ग¥यो, तर त्यो विवादमुक्त हुन सकेन । आयोगले बहुचर्चित बालुवाटारस्थित ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा आफ्नै पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात तथा चार पूर्वमन्त्रीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । यद्यपि, सो मुद्दामा आयोगको प्रशंसाभन्दा आलोचना धेरै भयो । नेकपाका नेता विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेल तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई जग्गा फिर्ता दिने सर्तमा उनीहरूलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिएको थियो । दबाबको भरमा उनीहरूलाई जोगाइएको आरोप आयोगमाथि लागेको छ । यो मुद्दामा आयोग सत्ताको छायाँमा पर्‍यो ।
स्रोतका अनुसार अनुसन्धान टुंग्याइएका कतिपय फाइलहरु समेत रोकिएका छन् । त्यसमा अकुत सम्पत्तिसम्बन्धि फाइलहरु समेत छन् । ‘उहाँ आफैंमा खराब मान्छे होइन,’ आयोगका एक अधिकारी भन्छन्,‘तर पछिल्लो समय उहाँमा बालुवाटारको छायाँ देखियो, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालको दबाबलाई सम्म नाई भन्न सक्ने आँट नै देखिएन ।’ अर्कोतर्फ घिमिरेको ठूला बिचौलिया समूहसँगको निकटताले पनि उनी असफल भएको जानकारहरु बताउँछन् ।
आयोगको स्टिङ अप्रेसन पनि विवादमा पर्दै आएको छ । त्यसविरुद्ध सर्वौच्च अदालतमा परेको रिट संवैधानिक इजलाशमा विचाराधिन छ । काम देखाउनका लागि मात्र स्टिङ अप्रेसन गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । पछिल्लो समय स्टिङ अप्रेसनमा पक्राउ परेका कर्मचारीहरुले धमाधम सफाई पाउन थालेको दृष्टि साप्ताहिकले लेखेको छ।
सचिवदेखि मन्त्रीलाई अख्तियार प्रमुखले दिए यस्ताे चेतावनी !
एक झोला पैसा लिएर काठमाडौँ आएका ईञ्जिनियर अख्तियारको फन्दामा
अख्तियार प्रमुखमा गणेशराज जोशीलाई नियुक्त गरिँदै, को हुन् जोशी?
नविन घिमेरे विदाभएपछि अख्तियार प्रमुखको कार्यकार गणेश जोशीले सम्हाले, को हुन् उनी?
मंगलवार, भाद्र ३० २०७७१०:२५:३७